Philippe Coutinho oo ka samraya kala bar mushaharkiisa si uu ugu ciyaaro koox aanan ahayn Barcelona – Gool FM
(Munich) 02 Luulyo 2020. Kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Bayern Munich ayaa horraan si ku meel gaar ah u kordhiyay heshiiska amaahda ah ee uu Philippe Coutinho kula sii joogayo kooxda hanatay horyaalka Bundesliga inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Balse waxaa wali ay su’aal kor taagan tahay mustaqbalka laacibka reer Brazil, kaasoo aanan wali go’aan rasmi ah ka gaarin halka xigta ee uu ka ciyaari doono.
Heshiiska amaahda ah ee Coutinho kula joogay Bayern ayaa ku ekaa 30-kii Juun, hase ahaatee dib u dhacii ku yimid xilli ciyaareedka xanuunka coronavirus awgii ayaa sababay inaylabada koox ku heshiiyaan in labo bilood lagu kordhiyo amaahdiisa, taasoo ka dhigan inuu diyaar u yahay kulanka fiinaalka koobka Jarmalka ee toddobaadka soo socda la ciyaari doono iyo tartanka Champions League oo dib loo baasan doono bisha Agoosto.
Sida laga soo xiganayo majaladda Bild ee kasoo baxda dalka Jarmalka, Bayern ayaa heshiisyada amaahda ah ee xiddigaheeda kordhisay, kuwaasoo kala ah Coutinho, Ivan Perisic iyo Alvaro Odriozola, se waxay wararku sheegayaan in laacibkii hore ee Liverpool uu ka hayaami doono Allianz Arena, halka labada xiddig ee kale ay sii joogi karaan gobolka Bavaria.
Ciyaartoydan amaahda ugu ciyaara kooxda heysata horyaalnimada dalka Jarmalka ayaa aqbalay inay jaraan 50% mushaharaadkooda si ay u sii joogaan Bayern Munich, iyadoo Coutinho uu daneynayo in xilli ciyaareed kale oo amaah ah uu kula sii joogo kooxdiisa.
Bayern Munich ayaa Bayer Leverkusen ku wajahi doonta fiinaalka koobka Jarmalka, halka Chelsea ay la ciyaari doonaan lugta labaad ee wareegga 16-ka tartanka Champions League, iyagoo kulankii hore ee ka dhacay Stamford Bridge ku soo adkaaday 3-0, waxaana ay u cadcad yihiin inay iska xaadirin doonaan magaalada Lisbon iyo wareegga rubac-dhammaadka.
Sidoo kale Bayern ayaa ku guuleysatay horyaalka Bundesliga horraan, xilli Bundesliga uu noqday horyaalkii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan si guul leh lagu dhammeystiro.